Wax Kasta Oo Aad U Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Safarka Yurub | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Wax Kasta Oo Aad U Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Safarka Yurub
Ka soo qaad inaad qorsheyneyso inaad booqato Midowga Yurub wakhti dhow. Haddii ay sidaa tahay, waxaa jira talooyin taxane ah iyo macluumaadka safarka ee muhiimka ah taasi waxay kaa caawin doontaa inaad khibradaada ka dhigto mid aad u xiiso badan. Mid baa u maleyn kara in uusan runtii farqi weyn u dhexeyn karin tixgelinta lagama maarmaanka u ah safarka Yurub marka la barbardhigo meel kale oo adduunka ah. weli, kordhinta ballaadhan ee ku jirta, waxaa jira waraaqo taxane ah oo sharci ah oo aad ugu baahan karto inaad ku gasho Yurub dalxiis ahaan. Sidoo kale, cimilo aad u kala duwan, quirks, iyo waxyaabaha dhaqanka u gaarka ahi waa lama huraan in maskaxda lagu hayo halkaas.
1. Safarka Yurub: Hesho Baasaboorkaaga
Baasaboorka ayaa ah waxa ugu weyn ee welwelka laga qabo maxaa yeelay waxay noqon doontaa kaarkaaga soo bandhigidda iyo fure u ah waddanka aad heleyso. Anaga ayaa daryeelayna baasaboorka marka hore. Dowladaada mudnaanta leh ayaa go’aamisa wadamada aad gali karto adigoon ka baaraandegin nooc kasta oo waraaqo gaar ah. Had iyo jeer way fiican tahay in la hubiyo haddii gurigaaga iyo safaaradaha aad ku tageyso ay leeyihiin xiriir diblomaasiyadeed oo joogto ah ama heshiis waqtiga safarkaaga. Inta badan waddamada ka socda Ameerika iyo Koonfur-bari Aasiya waxay leeyihiin marin-u-hayn aan laga kontorooli karin inta badan waddamada Yurub.
Markuu yiri tan, haddii aysan taasi ahayn; hesho lataliye safar safara oo kugu hagi kara inta aad ka shaqeyneyso rukhsadaha safarkaaga. Waxaad sidoo kale u baahan kartaa caddeyn caafimaad iyo wixii la mid ah si laguu oggolaado inaad hesho. Hadaad jeceshahay inaad baabuur wado intaad dibada joogto, sidoo kale waxaad u baahan doontaa ruqsada wadista caalamiga ah. Hadaad qorsheyneyso ganacsi, waxaa jiri kara rukhsado kale oo badan oo caalami ah oo loo baahan yahay in lagu safro. Waad ka hubin kartaa waraaqaha loo baahan yahay iyadoo loo eegayo ujeeddadaada socdaal ee websaydhka dawladda waddanka ku qaata.
Lyon to Toulouse Tareen
Paris oo ku socota Toulouse Tareen
Fiican Tuulo Tareen
Bordeaux oo ku socota Toulouse Tareen
2. Baro Sida Wax Loogu Xidho
Yurub waa qaarad weyn oo kaladuwan, laga bilaabo xeebaha qoraxda Andalucia ee Spain ilaa bariga Tundra ee barafka. Waa muhiim inaad xirxirato cimilada maskaxda iyo waxqabadyada aad qorsheyneyso inaad ku qabato dibadda. Xusuusnow inaadan xirxirneyn inaad ka guurto dalkaaga, ha qaadan wax badan ama yar; tani waxay kaa dhumin doontaa waqti yar inaad dharka soo xambaarto, kaa caawin doona jidka garoonka diyaaradaha, iyo xitaa waxaad badbaadin lacag by iyadoo laga fogaanayo lacag xad dhaaf ah. Waxaa ugufiican in la abaabulo boorsadaada safarka ama qaabka ciidanka shandada, surwaalkaaga rog, funaanado, sharaabaad, iyo nigis sida croissant a iyo iyaga oo dhan ku qaro weyn midba midka kale. Tani waxay ka hortageysaa dhibaatada ka soo laabashada dharkaaga waxayna kuu keydineysaa meel aad ku haboonaato alaabada nadaafadda ama elektaroniga. Tilmaamuhu sidoo kale waa waxtar haddii aad rabto inaad soo qaadato dhar aad ka iibsatay safarka. Talada kale ee wanaagsan ayaa ah inaad ku xirxirto boorso dheeraad ah hadiyaddaada ama alaabada aad wax ka iibsaneyso.
3. Safarka Yurub: Bangiyadaadu ha ogaadaan inaad dibedda joogtid oo aad qarash gareyso
Rabshad jabsiga kaarka deynta ah oo dhacday dhowr sano ka hor ayaa bangiyada ka dhigtay kuwo aad uga feejignaada halista. Waxay ku hogaamisay iyaga inay aasaasaan baloog marka hore siyaasada dambe ee ay weydiiyaan markay arkaan kaarka amaahda oo loo adeegsanayo wadan nasiib ah. Waa inaad shaqsi ahaan timaad bangigaaga ama aad siisaa wicitaan maxaa yeelay ogeysiisyada khadka tooska ah mararka qaarkood lama xisaabtamo. Qaadashada qodobkaan waxay ka fogaan doontaa khibradaha waxyeellada leh iyo ceebta inta aad wax iibsaneyso. Haddii aad u tagto bangiga sidoo kale waa fikrad wanaagsan inaad hesho xoogaa lacag maxalli ah intaad halkaa joogto. Khidmadaha sarrifka ayaa si aan macquul ahayn u buuxiyey dalxiisayaasha inta badan dukaamada Yurub iyo dhibcaha isdhaafsiga.
4. Safarka Yurub: Dib u dhigista
Haddii aad aadeyso "Qaaraddii Hore,”Xusuusnow inaad dokumentiyadaada la timaadid oo aad iska bixiso nooc kasta oo rukhsado caalami ah oo loo baahan yahay. Waraaqaha noocan ah ayaa lagama maarmaan ah haddii aad qorsheyneyso inaad booqato dalal kala duwan gudaha sharciga Yurub. Haddii aad qorsheyneyso safar safar ah, waxaa lagama maarmaan ah in la helo rukhsad wadista caalamiga ah lagana fogaado boos celinta. Sidoo kale, xusuusnow inaad si fudud u xir iyo inaad tixgeliso cimilada iyo waxqabadyada aad ugu sii adkeysan doonto dibadda. Had iyo jeer ka warbixi waddamada aad qorsheyneyso inaad lacag ku bixiso oo aad ka beddesho lacagaha kaliya hay'adaha idman. Ugu dambayn, waxaad la xiriireysaa dad kala duwan, cuntooyinka, dhaqamada, ha ilaawin inaad ku raaxeysatid oo aad ku raaxaysatid khibrada.
Hadda waad ogtahay wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato, waxaan at Save A tareenka, diyaar u yihiin inay kaa caawiyaan dhammaan baahiyahaaga kale ee tareenka.
Ma rabtaa inaad ku dhajiso bartayada blog-ka “Wax Walboo Aad U Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Socdaalka In Europe” boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feverything-know-traveling-europe%2F%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Midowga Yurub eurotrip aqoon SafarkaToEurope traveltips
Ela waa wakiil safar. Jacaylkeeda safarka ayaa kacay markii ay yarayd sidaas darteed, waxay noqotay wakiilka socdaalka si ay macluumaad u siiso, talo, iyo adeegyada ballansashada ee dadka doonaya inay safraan. Waqtigeeda firaaqada, waxay jeceshahay akhriska iyo gaar ahaan kuwa ku saabsan sheekooyinka la xiriira safarka. Farxaddeeda iyo qadarinta ay u leedahay safarka ayaa ka dhigtay iyada inay bilawdo inay wax ka qorto wixii ku soo maray iyada oo ah qaab ay ku caawin karto dadka kale ee safarka jecel - Waxaad halkan si aad u riixi kartaa La xiriir Rebecca